Liquid Telecom သည် HARC မှအာဖရိကရှိ Linear DTH ဝန်ဆောင်မှုအတွက် HEVC Headend Solution ကိုရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အာဖရိကရှိ Linear DTH ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သဟဇာတ မှစ. အရည်တယ်လီကွန်းကို select HEVC Headend ဖြေရှင်းချက်
အာဖရိကရှိ Linear DTH ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သဟဇာတ မှစ. အရည်တယ်လီကွန်းကို select HEVC Headend ဖြေရှင်းချက်
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ မေလ 3, 2016 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT), ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့အရည်တယ်လီကွန်း, ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောဒေတာ, အသံများနှင့်အရှေ့ပိုင်းအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းအာဖရိကမှာ IP ကို ​​service provider ကအသစ်တစ်ခု direct- များအတွက်အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှု headend ဖွင့်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ကနေပြီးပြည့်စုံသော headend ဖြေရှင်းချက်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများမှနေအိမ် (DTH) ဝန်ဆောင်မှုပေး သဟဇာတ.
အရည်ဆက်သွယ်ရေးအသုံးပြုနေသည် သဟဇာတ'' s ကို ProView (TM) 8100 ဘက်ပေါင်းစုံလက်ခံဒီကုဒ်ဒါ (IRDs), Electra (TM) X2 အဆင့်မြင့်မီဒီယာပရိုဆက်ဆာ, ProStream (R) 9100 High-density ကိုစီးပရိုဆက်ဆာနှင့် NMX (TM) ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှု Manager ကိုသစ်ကို headend သည်။ linear ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ဝေဘို့အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အရွယ်မှာ HEVC ကဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းနည်းတွေနဲ့အရည်ဆက်သွယ်ရေးပေးခွငျးအားဖွငျ့, သဟဇာတ , bandwidth ကိုထိရောက်မှုတိုးမြှင့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်း, OTT multiscreen application များအတွက်အနာဂတ်ဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြေရှင်းရန် service provider က enable ပါလိမ့်မယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအံ့ဆဲဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ပန်းတိုင် multiscreen ပေးပို့ပါဝင်သည်ကြှနျတျောတို့၏ကျယ်ပြန့်ရည်မှန်းချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့သရုပ်ပြဖြန့်ကျက်အတှေ့အကွုံ, နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေလမ်းပြမြေပုံနှင့်အတူဗွီဒီယိုတစ်ခုအခြေခံအဆောက်အအုံပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ဖြစ်တယ်," ဖြစ်သူ Scott Mumford, အုပ်စုတစုကိုစီမံခန့်ခွဲအလုပ်အမှုဆောင်ကလည်း, ဂြိုဟ်တု နှင့်အရည်တယ်လီကွန်းမှာ VSAT ။ "ဈေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရှာနေခဲ့ကြသည်တစ်ဦးတည်းသာဖြေရှင်းချက်၏သက်ဆိုင်ရာ suite ကိုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ, နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် pedigree ရှိသေး၏။ သဟဇာတ'' s ကို headend ဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ကို software များကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေတဆင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတူအနိမ့်နည်းနည်းနှုန်းထားများမှာသာလွန်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြု, အ MPEG-4 AVC နှင့် HEVC အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်ဗွီဒီယိုချုံ့နည်းပညာများ, အဖြစ်စာရင်းအင်း multiplexing ထောက်ခံပါတယ်။ "
အရည်ဆက်သွယ်ရေးအသုံးချပါလိမ့်မယ် သဟဇာတ'' s ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် turnaround များအတွက် ProView 8100 IRDs ဂြိုဟ်တု ဧည့်ခံ။ သူတို့ကအတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည် သဟဇာတ'' s ကိုစျေးကွက်-ဦးဆောင် Electra X2 SD က high-အရည်အသွေး, Low-bandwidth ကို HEVC encoding ကများအတွက်မီဒီယာ processors ကိုချီတက်နှင့် HD ဗီဒီယိုကအကြောင်းအရာ။ က Powered သဟဇာတ စင်ကြယ်သော Compression ကိုအင်ဂျင် (TM), မီဒီယာပရိုဆက်ဆာကဗီဒီယိုကို formats နှင့်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများများအတွက်၏ကျယ်ပြန့ထောကျပံ့ ဂြိုဟ်တု ဖြန့်ဝေ, service provider များအတွက်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အနာဂတ်အဆင့်မြှင့် simplifying ။
အဆိုပါ Electra X2 ပရိုဆက်ဆာများအကြားတင်းကျပ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် သဟဇာတ'' s ကို DiviTrackIP နှင့်အတူ ProStream 9100 စီးပရိုဆက်ဆာ (TM) statmux နည်းပညာအရည် Telecom ၏စာရင်းအင်း multiplexing စစ်ဆင်ရေး၏ထိရောက်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ headend အစိတ်အပိုင်းများကိုအားလုံးကထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည် သဟဇာတ'' NMX ဗီဒီယိုကကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက့်။
"သဟဇာတ ထူးခြား, ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်တဲ့ပြည့်စုံ headend ဖြေရှင်းချက်များကိုအရည်တယ်လီကွန်းရဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့အသစ်စျေးကွက်နှင့်အကျိုးအမြတ်ကြီးထွားဖို့လက်လှမ်း positioned ဖြစ်ပါတယ် "ဟုမှ Ian ဂရေဟမ်မှာရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ EMEA ကလည်း, သဟဇာတ။ "ဒီစီမံကိနျးအတှကျပထမဦးဆုံးအဓိက DTH HEVC headend ဖွစျလိမျ့မညျ သဟဇာတ။ အထူးသဖြင့်, Electra X2 မီဒီယာ processors ကိုအရည် Telecom ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏သုံး transponders အပေါ်ရရှိနိုင် bandwidth ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုစေနှင့်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဖောက်သည်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ထို HEVC codec ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်။ "
သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ထွန်းသစ်စရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများအတွက်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သဟဇာတ ဖောက်သည်ဈေးကွက်-ဦးဆောင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု, အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆွဲဆောင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့အသုံးပြုပုံမတူညီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသွက်လက်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်သောဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများ, ထုတ်လုပ်ရန်ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.harmonicinc.com.
ဤသည်စာနယ်ဇင်းလွှတ်ရာမျှော်လင့်စွမ်းရည်နှင့်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ပြန်ချက်များအပါအဝင် 27 ၏ Securities မှအက်ဥပဒေပုဒ်မ 1933A နှင့် 21 ၏ Securities Exchange အက်ဥပဒေပုဒ်မ 1934E ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များ, ပါရှိသည် သဟဇာတ'' s ကို DiviTrackIP (TM), Electra (TM) X2, NMX (TM), ProStream (R) 9100, ProView (TM) 8100 နှင့်စင်ကြယ်သော Compression ကိုအင်ဂျင် (TM) ထုတ်ကုန်။ ထိုကဲ့သို့သောသစ်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖွင့်အဖြစ်ထုတ်ကုန်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်စွမ်းရည်အချို့ကိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်အကျိုးခံစားခွင့်အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုမပေးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေအပါအဝင်ထိုထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများရုပ်လုံးပေါ်လာနှင့်အန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာမှဘာသာရပ်များမှာမပြုစေခြင်းငှါ, စျေးကွက်များနှင့်အစုစုကိုကြီးထွားမှု, A မြင့်ဆုံး Bandwidth ကိုထိရောက်မှုနှင့်အောက်ပိုင်းနည်းနည်းမှုနှုန်းမှာတိုးတက်လာသောဗွီဒီယိုအရည်အသွေးများ၏ပို့ဆောင်မှု, OTT multiscreen applications များ၏အနာဂတ်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း။
ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသောအဆိုပါရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးအပြည့်အဝမှာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေကိုကဲ့သို့သောအခြားအန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာမှဘာသာရပ်များမှာ သဟဇာတ'' s ကို Dec.10, 31 အဆုံးသတ်နှစ်အတွက် Form ကို 2015-K သည်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအပါအဝင် Securities and Exchange Commission နှင့်အတူဖိုင်များ, ၎င်း၏လပတ် Form ကို 10-မေးနှင့်အ Form ကို 8-K သည်၎င်း၏လက်ရှိအစီရင်ခံစာများအပေါ်အစီရင်ခံစာများ။ ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များမှမရရှိနိုင်ပါသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံထားပါသည် သဟဇာတ ရက်စွဲ၏အဖြစ် hereof နှင့် သဟဇာတ မဆိုရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များကို update လုပ်ဖို့မဆိုတာဝန် disclaims ။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=Liquid%20Telecom%20Selects%20HEVC%20Headend%20Solution%20From%20Harmonic%20for%20Linear%20DTH%20Service%20in%20Africa%20-%20http://goo.gl/4yFqIZ
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/သဟဇာတ/သဟဇာတ-ElectraX2.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: သဟဇာတ Electra (TM) X2
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ သဟဇာတ HEVC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အရည်တယ်လီကွန်း တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-05-03
ယခင်: Interra စနစ်များ KOBA 2016 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
နောက်တစ်ခု: Bluebell Opticom မှစ. SMPTE Cable ကိုအစားထိုးအတူ ITV connection စတူဒီယိုနဲ့ Master ထိန်းချုပ်ရေး